China Truss welding yi okoxande ityhubhu mveliso kunye nabenzi | Honghua
Truss nge welding yi ityhubhu yoxande
Ityhubhu yesikwere ityhubhu esisigxina yeyona ndawo iqhelekileyo kwintengiso. Ayakhi nje kuphela ubude bayo kodwa ikwathwala amandla amakhulu, kulula ukuba ifakwe kwaye ilungiswe, kwaye inokusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle. Umbhobho awudingi uqhagamshelo lwentloko yesikwere, kungoko ke kungonga iindleko.
Ityhubhu ityhubhu esisigxina itruss nayo yindawo esetyenziswa ngokubanzi, enokusetyenziselwa ngaphakathi okanye ngaphandle ukwakha iholo yomboniso okanye udonga olungasemva. I-TRUSS, enokuthi ithathe indawo yokukhanya kwe-aluminium alloy ukukhanya kwe-TRUSS (eyaziwa ngokuba sisakhelo se-TRUSS), ayinakusongwa, ukuze ikwazi ukumelana nemikhosi emikhulu kwaye ayifuni nkxaso kubude bayo ukuya kuthi ga kwi-13 yeemitha. Isetyhula ityhubhu esisigxina truss nayo kufuneka isetyenziswe ngentloko yesikwere.
Egqithileyo Welded ityhubhu isikwere
Okulandelayo: Truss nge welding yi-engile